Faah faahin:- Dagaal aad u culus oo ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dagaal aad u culus oo ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose
Dagaal xooggan oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa AMISOM iyo dagaalyahanadda Al-shabaab oo dhinac ah ayaa caawa ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose.
Dagaalkaas ayaa sida la sheegay bilawday, kadib markii dagaalyahanadda Al-shabaab ay weerar labo geesood ah ku qaadeen fariisimo ay ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ku lahaayeen degmadaasi.
Inta la xaqiijiyay labo ruux oo mid kamid ah yahay Al-shabaab ayaa dagaalkaasi ku dhintay, seddax kalena dhaawac ayaa soo gaaray sida uu inoo xaqiijiyey sarkaal ka tirsan dowladda Soomaaliya oo aynu qadka teleefanka kula xiriirnay.
Sarkaalkaasi ayaa sidoo kale inoo sheegay in dhankooda aanay wax khasaare ah kasoo gaarin dagaalkaasi, isla-markaana ay xaaladdu caawa tahay mid aad u kacsan.
Al-shabaab kama aanay hadal dhankooda dagaalkaan, hase ahaatee dagaallada sidaan oo kale ah ayeey ku qaadaan magaalooyinka ay maamusho dowladda Soomaaliya.